Inzvimbo yeSeva inobatsira Bhizimisi Renyu Here? Unyanzvi Kubva Semalt
Kutengeswa kwepaIndaneti inzira yakaoma inokubvumira kusvika kune mamiriyoni evanhuvatengi mukati mechinguva chiduku. Mabhizimisi uye vezvemabhizimisi vari kusarudza misika yemuInternet nekuda kwekukwanisa kwayo kusingaperivatengi munyika yose. Makambani akawanda akabudirira nemakambani avo ekudhinda ekudhinda, nekuda kwehutano hwavo hwakanaka hwekutsvaga geo.
Kubudirira uku kunokonzera vanhu vazhinji kuti vabatanidzwe mune zvinotarisirwa SEO. Somugumisiro, nzvimbovafudzi vanoda kuti webhusaiti yavo ibatsire kuva mune dzimwe nyika, pane zvimwe zvakanyatsogadziriswa maitiro ekugadzirisa zvirongwa - fucanglong slot. Muzviitiko zvakawanda, vanhu vanogonaanoshamisika kuti ungabudirira sei mu geo-targeting pasina kushandiswa kwepanyama nzvimbo nzvimbo.
Max Bell, nyanzvi ye Semalt Dhidhiyo Dhiyabhorosi inoshandisa zvakavanzika zveGo-targeting yebhizimisi.
Pakutanga, kune zvakakosha kufunga pamusoro pekufungisisa. Semuyenzaniso:
Nzira yekubata nayo nendimi dzakasiyana-siyana dzine imwe server nzvimbo
Nzira yekuita kuti webhupleri dzewebhu dzisiyane sei mutauro wechipiri kubva kune zvinyorwa zvinyorwa
Nzvimbo yakadini iyo inogona kuchinja SEO
Chii chinokonzera nzvimbo yevharesi pamusikana wangu
Zvisinei, iyo nzvimbo yakachengetwa haifaniri kunge yakakosha pane e-commercekubudirira zvakare. Vashandi veGoogle Webmasters vane CDNs, iyo inogona kugadzira mamwe mafungiro echeji-targeting uye inova nechokwadi chokuti zvinyorwa zvinosvika kune vamwevakatarisa vatengi pasi pasi, izvo zvingangogoneka kuburikidza nekushandiswa kwema-server nzvimbo dzakanaka.
Nzira dzekutsvaga zvigadziriswe munyika imwe mune mutauro mumwe
Zuva rezuva kutsvaga injini dzakafanana neGoogle uye Bing vane zvishandiso zve webmaster, izvokupa basa rekutarisa imwe rudzi rwemigwagwa..MuGoogle Webmaster Tools, urongwa uhwu hunowanika paStraffic Traffic>Mune dzimwe nyika inotarisa> Nyika tab. Nyika yaunoda kuigadzirisa kuti uone zvayo inofanira kuwanikwa mumusidho wakaderera. Mune zvimwe zviitiko,Vashanduri vewebhu vanogona kusarudza hurongwa hwekugadzirira dzine nyika-coded domain-level domain. Ichi CCDL inogona kusanganisira webhusaiti yeIndaneti yakadaiwww.mysite.de kune nzvimbo yeGermany. Tsvaga injini yakafanana neGoogle inoshamwaridzana nemuzinda uyu neyo nyika chaiye. Munyaya iyi,website yakadaro haigone kushamwaridzana neimwe nzvimbo.
Zvisinei, mamwe mawebsite anoshandisa domaic-level domains yakadai se (.com, .org, etc.).Mune zviitiko izvi, musarudzo ane sarudzo yekusika shandisi yevashandisi kana zvinyorwa zvinyorwa zveimwe nyika. Kana zvisina kudaro, injini yekutsvagainongozvibatanidza nemamwe mamiro akadai se:
Backlinks anouya kunzvimbo
Dunhu rekushandisa kubva kune zvinyorwa uye
Ruzivo ruzivo kubva pane zvishandiso seGoogle Bhizimisi Bangu
Zvinogoneka kuisa webhusaiti kuSpain uye inotarisa zvose zvayokusvika kuGermany uchishandisa Google kana mabhidhi webmaster mabhii. Paunenge uine nzvimbo dzakadaro, zvinokosha kufunga nezvekuita kwepaji pakuteerera nguva.Nzvimbo yepawebsite inotakurisa zvikuru kana musikana ari munyika iyo nzvimbo yesaiti inogara.
Zvakare, webhusaiti inogona kutora nyika yose. Munyaya iyi, Google inokurudzirauchishandisa mhando isina kunyorwa munyika yacho inoderedza kusarudzwa. Kukundikana kuita izvi, mumwe angasuwa mamwe mazano, kunyanya nekuda kwezvinowanzoitika SEO, iyo Google inoisa pawebsite. Kushandisa Content Delivery Network (CDN) inokoshawo. Iyo CDN inoshandasarudzo inopa imwe inoshanda sevha nodes uye inoita kuti site inopindura zvakananga.